Hiran State - News: Xakuu ku danbeeyey qilaafkii Shiikh Shariif iyo wasiirka qorsheynta ee gudah aHiiraan looga yaqaano wasiirkii Road-Map?
Xakuu ku danbeeyey qilaafkii Shiikh Shariif iyo wasiirka qorsheynta ee gudah aHiiraan looga yaqaano wasiirkii Road-Map?
HS:-Xakuu ku danbeeyey qilaafkii Shiikh Shariif iyo wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga amaba ninka ay reer Hiiraan ugu yeeraan wasiirka Road-Mapka?
Qilaaf intiisa badan ka bilaawday Hiiraan ha lagudaro Jowhar oo ay iska kaashanayeen Shiikh Shariif iyo Cabdullahi Godax iyo ganacsato reer Hiiraan ah ayaa ugu danbeyn gaaray heerkii ugu xumaa ilaa ay wasiirka iyo Shariifka hal diyaarad isla raacaan iyagoo midba midka kale eegi karin.
Hadaba hadaanu dul marno meeshey wax marayaan qilaafku walito ma dhamaan laakinse dhamaan intii waday qorshaha Hiiraan Jowhar ha lagu daro dhamaantood meel cidla ah ayey soo istaageen waxeyna dantu ku qasabtay in midkasta iskiis iyadoo wax jaceyl ah loo heyn ka tanaasulo arintii awalba u muuqatay waanu socon weynaye aanu cararno maxaa yeelay Shiikh Shariif horta koormee reer Hiiraan wax ka dhadhicin karaa?
1- Marka uu hakiyo maamul goboleedyada faraha badan ee ay maalinkasta ku dhawaaqayaan beeshiisa oo hada mareysa 5 mamul goboleed sida warar kala duwan lagu helayana waxey ku talo jiraan iney gaarsiiyaan ilaa 9 maamul si jifa kasta oo ka tirsan beelweynta Abgaal u helaan min hal maamul maadama ay ka kooban yahiin 9 jifo hoosaad.
2-In isaga iyo shaqsiyaadkii howshaan kula jiray sida wasiirka Road -Mapka raali ahaada magacaan waa midka bulshada reer Hiiraan u taqaano wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga Cabdullaahi Godax Bare maadama aysan axtiga kumeel gaarka ah qodobka uu ka hadlayo ee nidaamka maamul goboleedka dalka looga hirgalin karo iyo waxa u farayo midna ku dhaqmeyn waayo qodobkaasi waxuu u qoran yahay sidan. QAYBTA 4AAD
DOWLADDA FEDERAALKA EE KU MEEL GAARKA AH QODOBKA11
1. Dowladda Federaalka ee Ku meel gaarka ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliya waxay yeelan doontaa xukun qaybsan oo ku salaysan nidaamka federaalka.
Waxa meeshaas ka cad in waxkasta oo ku saabsan qaabka loo sameynayo amaba isku raacayaan gobolada tahay in lagala tashto shacabka sida aad ku aragtaan qodobka ma jirto wax qsab ka dhigaya in Hiiraan la raaciyo Jowhar amaba meel kale laakinse aysan go,aan iska gaari karin shaqsiyaad amaba koox taasi oo markii ay aqoonyahano reer Hiiraan ah u sharaxeen wasiirka Road Mapka iyo kala dhicinta reer Mudug Cabdullaahi Godax Bare ku dhiiragelisay inuu ka tanaasulo howshaasi lagu qiyaanayey reer Hiiraan meelna uga dhaceysay sharaftooda iyo karamadooda, waayo Jowhar iyo guud ahaan Sh/dhexe laga bilaabo Degmada Mahadaay ilaa Dhinaca galbeed ee gobolkaasi oo ku taga xadka uu gobolkaasi la leeyahay Sh/hoose waxaa dego shacab u dhashay Hiiraan.waxaaba qalad ah inba leys barbar dhigo Hiiraan iyo magaalo ka tirsan Sh/dhexe oo ay waliba reer Hiiraan degan yahiin 70%.
Laakinse wasiirka Road mapka oo isticmaalaya dhalinyaro aan si wanagsan u garaneyn dhulka ay reer Hiiraan degaan baxadiisa ayaa meel la soo istaagay sedax qodob oo aheyd fariin ay ka wadeen Mr Godax oo loo maleynayey iney ka hadlayaan axdi qarameedka laakinse waxey arintii ku soo koobeen xeer Somali waxeyna hadalkii u dhigeen sidan.
Shiikh Shariif iyo beeshiisa waxey noo ogol yahiin in marka Hiiraan iyo Jowhar leysku daro 1-caasimad laga dhigo Bulo Burde 2- madaxweynaha maamulkaas hogaaminayo sharuud la,aan noqdo shaqsi ka soo jeeda beesha aanu ka dhalanay. 3- magaca lagu midoobayo uu noqdo midka Hiiraan.
Wxaana arintii markey heerkaas mareyso ka soo horjeestay 100% qurba joogta iyo waxgaradka reer Hiiraan oo dhan ilaa arintaan lagu xiro keena qodobka ogolanayo in Hiiraan la hoos geeyo Jowhar ooworan bulshada Hiiraane la hor geyn karo.
Marka la soo koobo qilaafkii Shariifka iyo isaga waxey arinta hada mareysaa in wasiirka qorsheynta amaba road Mapka doonayo inuu safaro ku kala bixiyo wadamo ka tirsan Yurub oo laga xusay UK iyo waqooyiga America kadib markii ay xiriirka si toos ah uga jarteen qurba joogta oo aad uga niyad jabay.
Siyaasada Mr Godax waxey hada mareysaa warna i raac waqtigana dhamaa waxaana mudo lagu xasuusan doonaa amaba mustaqbalka marka reer Hiiraan helaan nidaam iyo kala danbeyn maxkamad lagu soo taagi doonaa ( Isku day beecin magaca Hiiraan) isaga iyo rag kale oo ganacsato ah.
Waxase xusid mudan shariifka ma kaabe qabiilbaa mise waa hogaamiye Somaliyeed, kooxda fikirkaan kula shirkowdayne maxey reer Hiiraan gudahooda ka noqonayaan mustaqbalka marba hadey isku dayeen wax aan reer Hiiraan waligood ku fikirin intii ay jirtay taariikhda Hiiraan oo soo martay marxalado kala duwan?
· admin on October 24 2011 15:02:53 · 0 Comments · 1872 Reads ·
14,589,158 unique visits